I-Raw Finasteride powder (98319-26-7) Abavelisi - Phcoker
SKU: 98319-26-7 Udidi: Sex Hormone
I-Raw Finasteride powder (98319-26-7) ividiyo
I-Raw Finasteride powder yi-antiandrogen esetyenziswe ngomlomo eyenza ngokuthintela uhlobo lwe-II 5-alpha reductase.Isetshenziswe njengonyango lwenkunkuma (iprothem yesilisa), i-benign prostatic hyperplasia (BPH) kwiqondo eliphantsi, kunye nomhlaza womhlaza wesifo kwi-doses ephezulu . Kwakhona kuboniswe ukuba kusetyenziswe ngokudibanisa ne doxazos kwipilisi yokunciphisa umngcipheko wokuqhubela phambili kwe-BPH. Ukongezelela, ibhaliswe kumazwe amaninzi nge-androgenetic alopecia
I-Raw Finasteride powder (98319-26-7) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Finasteride powder
Igama leKhemikhali N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide;17β-(N-tert-Butylcarbamoyl)-4-aza-5α-androst-1-en-3-one; N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide
uhlobo Numama Proscar, Propecia
Iqela leziyobisi I-5-alpha reductase inhibitors, i-synthetic steroid, i-Benign Prostatic Hypertrophy Agents
Inani leCAS 98319-26-7
I molecular Fi-ormula C23H36N2O2
I molecular WSibhozo 372.54
IMasaisotopic Mass 372.278 g / mol
Ukuxuba Point 253 ° C
I-Biological Half-Life Iiyure ze-6-8
umbala Umhlophe / umhlophe ukubopha i powder
Sukufaneleka I-DMSO: i-32 mg / mL, i-soluble yamahhala kwi-Chloroform kunye notywala, inqabile kakhulu emanzini
I-Raw Finasteride powder Aukuguquka Ukuphatha ukulahleka kweenwele (umzekelo wesilisa) kuphela ngabantu abadala. I-Raw Finasteride powder ingasetyenziselwa ukwelapha i-benign prostatic hyperplasia, i-prostate eyandisiweyo iyancipha, ukuphucula ukuhamba kwamanzi kunye nokuphuculiswa kwe-prostatic hyperplasia kubangela iimpawu.
I-Raw Finasteride powder (98319-26-7) Inkcazo
I-Finasteride inqanda ukuguqulwa kwe testosterone kwi-dihydrotestosterone (DHT) emzimbeni. I-Finasteride isetyenziselwa unyango lwendoda yokulahleka kweenwele kwi-vertex kunye nommandla wangaphakathi we-scalp. Ukulahleka kweenwele zependeni yindoda yinto eqhelekileyo apho amadoda afumana ukunqunyulwa kweenwele kwi-scalp. Ngokuqhelekileyo, oku kubangela ukunyuka kweenwele kunye / okanye ukubhada phezulu kwentloko. Ipropecia yinto yokusetyenziswa ngabantu kuphela kwaye ayifanele isetyenziswe ngabasetyhini okanye abantwana.
I-Finasteride powder (98319-26-7) Indlela yokuSebenza
I-Finasteride isebenza ngokunciphisa inani le-hormone dihydrotestosterone (DHT) emzimbeni wakho. I-DHT ibangela ukuba i-prostate yakho ikhule ngakumbi.
Ukuhla kwe-DHT kunceda ukukhusela iprotate yakho ekukhuleni okukhulu. Kwakhona kukhokelela ekwandeni kweenwele kunye nokwehla kwentlungu yeenwele entloko yakho. Ukukhula kweenwele kwezinye iindawo zomzimba akuchaphazelekayo.
Ukusetyenziswa kwePfinasteride powder (98319-26-7)
I-Finasteride powder isetyenziselwa ukuphatha imodeli yamadoda (androgenetic alopecia) kwisithsaba naphakathi kwesikhumba. Kufuneka isetyenziswe ngabantu abadala kuphela.
Iphakanyiswe iPowasteride powder (98319-26-7) Isisombululo
♦ Ukuxhomekeka koMntu omdala we-Benign Prostatic Hyperplasia
5 mg ngomlomo kanye ngosuku
Iingxelo: Ukuzikhethela kuyafana kokubili kwi-monotherapy kunye neyonyango.
♦ Ukwenza i-Adult Dose ye-Androgenetic Alopecia
1 mg ngomlomo kanye ngosuku
Ukuze unyango lwenyanga yokulahleka kwentloko (kunye ne-orrogenetic alopecia) kumadoda kuphela. (Ukukhusela kunye nokuphumelela kuboniswe kumadoda phakathi kwe-18 ukuya kwi-41 yeminyaka ubudala kunye nokulahlekelwa kweenwele ezincinci ukuya kuyingqinisiso ye-vertex kunye nommandla wangaphakathi we-scalp).
Iingxelo: Ukusetyenziswa kwimihla ngemihla ye-3 inyanga okanye ngaphezulu kuyimfuneko ngaphambi kokuba inzuzo ibonwe. Ukusetyenziswa okuqhubekayo kucetyiswa ukugcina inzuzo. Ukurhoxiswa kwonyango kubangela ukuguqulwa komsebenzi kwiinyanga ze-12.
Imiphumo emibi yeFfinasteride powder (98319-26-7)
Fumana uncedo lwezonyango lwexesha loxinzelelo xa unayo nayiphi na le miqondiso yempembelo yokuphikisa: imihlathi; ukuphefumula; ukuvuvukala kobuso bakho, imilomo, ulwimi, okanye umqala. Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba uyaphawula nayiphi na isifuba sesifuba, intlungu, ukukhutshwa kweentsimbi, okanye olunye utshintsho lwebele. Ezi zinokuba yimpawu zesifo somhlaza wesilisa.
Iziphumo ezingekho phantsi kwezezimali zeFinasteride zingabandakanya:
▪ ukungabi namandla, ukulahlekelwa ngumdla kwisini, okanye inkathazo yokuba ne-orgasm;
▪ ukunyuka okungavamile;
▪ ukuvuvukala ezandleni okanye ezinyaweni;
▪ ukuvuvukala okanye ububele kumabele akho;
▪ utywala, ubuthathaka;
▪ uvakalelwa ngathi ungadlula;
▪ impumlo yebhola; okanye
▪ ukugqithisa kwesikhumba.
Iziphumo zesondo zohlobo lwe-Finasteride powder (ukunciphisa i-libido, inkathazo yokuba ne-erection, iingxaki ze-ejaculation) ingaqhubeka emva kokuyeka ukuthatha le mayeza. Thetha ugqirha ukuba unenkxalabo malunga nale miphumo.
I-Raw Flibanserin powder iyinkunkuma yesigqirha esiboniswe ukunyanga kwabasetyhini base-foremenopausal abanokufumana isondo soxhatshazo oluqhelekileyo ....